Kutheni ukufunda kwelinye ilizwe lingamava atshintsha ubomi ngo-2022
Kutheni ukufundela kwelinye ilizwe ngamava atshintsha ubomi
Ukufundela kwelinye ilizwe akukhona nje ukufumana isiqwenga sephepha elaziwa ngokuba sisidanga. Kuba njengomfundi wasekholejini unokufumana idigri efanayo ngokuhlala kwilizwe lakho. Nangona kunjalo, kukho isizathu esihle kakhulu sokuba kutheni inani labafundi abathatha isigqibo sokuzifundisa ngaphandle kwelizwe labo liqhubeka nokunyuka.
Ngenxa yophando oluthile, kule minyaka ingama-25 idlulileyo, inani liye laphindeka kathathu, kwaye ngoku, i-100.000 labafundi abangakumbi abavela eMelika bazifundisa phesheya xa kuthelekiswa neshumi leminyaka elidlulileyo. Emva kokuba sifunde ezinye izincoko kunye nemizekelo iphepha nge izihloko malunga namava obomi kwabo bafundi, sibaxhasa ngokupheleleyo abo bakhetha ukuyenza. Kuba phantse yonke iisampulu yesincoko esinezihloko ezinxulumene nabafundi abahamba phesheya, sifumene iingxelo apho bathi loo mava obomi abutshintshe kakhulu ubomi babo kwaye abanceda ukuba babengcono njengomntu.
Nangona eyona nxalenye inomdla yaloo mizekelo yesincoko kukuba bonke abo bafundi babelana ngamava ahlukeneyo, kwaye bathetha malunga noko kukufunda kumazwe aphesheya kuthetha kubo ngabanye.
Noko ke, ezi zinto zine zilandelayo zizinto ezifanayo zonke. Ke, masingene nzulu ngakumbi kwaye sibone ukuba yintoni eyenza ukuba ukufunda phesheya kwahluke kakhulu kwaye kubekhona ngakumbi, kunye nokuba amava okufunda phesheya abutshintsha njani ubomi babafundi.
Ukufunda phesheya kuthetha ukuhlola.
Esinye sezizathu ezinkulu zokuba abafundi bathathe isigqibo sokuthatha eli nyathelo kukubona ihlabathi. Abafundi abafumana ukufunda phesheya banethuba lokufumana amava kwaye baphonononge ilizwe elitsha ngamasiko amatsha, imisebenzi kunye nemibono.
Ewe, akukho mfundi ulinganiselweyo ekuhambeni, nto leyo ebavumela ukuba bahlole amazwe angabamelwane. Enkosi kwithuba lokungqina indlela entsha yobomi, baqala ukuqonda ngcono ezinye izizwe kunye neenkcubeko.
Elona candelo lilungileyo malunga nalo yinto yokuba okwangoku abafundi banethuba lokwenza abahlobo bobomi babo bonke abavela kwiinkcubeko ezahlukeneyo, ezinje ngelizwe elibamba umkhosi okanye abafundi abayinxalenye yesifundo phesheya abavela kwihlabathi liphela.
Ukufunda phesheya kukhuthaza ukukhula komntu.
Kwiindawo ezininzi zehlabathi, abafundi abafane babonwe behlala bodwa. Ke, ukukhetha ukufunda phesheya kuvumela uphuhliso lomntu olungenakwenzeka ngokuhlala ufundela ekhaya.
Ukuhamba nokuhlala bodwa kunika abafundi imvakalelo enkulu yokuzimela kwaye kwandise kakhulu iimbono zabo zehlabathi. Ibafundisa ukuba babe ngabahloli kwaye ibavumele ukuba bafumanise umdla wabo. Kusenokuba nzima kubo ukuba kwindawo entsha bebodwa kwaye benze yonke into bebodwa okokuqala ngqa ebomini.
Nangona kunjalo, oko kuvavanya ukukwazi kwabo ukuziqhelanisa neemeko ezahlukeneyo kwaye kubanika ithuba lokuzibona.
Ukufundela phesheya kunika imfundo eyahlukileyo.
Esinye isizathu sokuba abafundi bathathe isigqibo sokuthatha eli nyathelo ebomini kukuba bafuna ukufumana isimbo esahlukileyo semfundo.
Kukho nezinye iimeko apho abafundi bathatha eli nyathelo lokukhangela imfundo ekumgangatho ongcono. Kodwa nokuba imeko ithini na, ukufunda phesheya kuvumela abafundi ukuba bafumane iindlela ezahlukeneyo zokufunda, babe nezifundo ezahlukeneyo, kwaye bafumane ulwazi abangenakulufumana ekhaya. Kuba ilizwe ngalinye linenkqubo yalo yemfundo eyahlukileyo. Oku kuthetha ukuba abo bathatha isigqibo sokufunda phesheya, ngaphandle kolwazi olusisiseko, kufuneka baqhubeke befunda kwaye baziqhelanise nezinto ezintsha.
Ukufunda phesheya kuthetha amathuba angcono emisebenzi.
Xa ucwangciso lokufunda lugqityiwe, abafundi babuyela emakhaya nabaninzi amava obomi, imbono entsha ngenkcubeko, imfundo ebalaseleyo, ubuchule obutsha, kunye nokuzimisela okukhulu ukufunda.
Kule mihla abaqeshi bajonge nje olo hlobo lomsebenzi kuba amava amazwe ngamazwe ngaphandle kwazo zonke izakhono, kwakhona, abonelela abantu ngenqanaba elitsha lokuqonda kwenkcubeko kunye nehlabathi. Okukuthi, ekupheleni kosuku, kuvule iingcango ezininzi zomsebenzi.
Amava omfundi wamazwe ngamazwe anokubaluleka ngakumbi ekuhambeni kwexesha kunokuba abafundi bafunde eklasini. Inceda abafundi baphuhlise izakhono zenkcubeko, ibafundise ukuzimela, kwaye ibancede bafunde ngeziqu zabo. Konke kuzo zonke, kuchazwa njengamava anamandla okanye aguqula ubomi ahlala nomntu ngonaphakade.
Post Previous:Ngaba imidlalo ye-Intanethi iyinceda njani indalo esingqongileyo ukuba izihlambulule kungcoliseko?
Okulandelayo Post:Ibhalwa njani i-Autobiography yeNkqubo yokuTshintshela uMfundi